DEG DEG: Israsaaseyn xooggan oo Caawa ka dhacday Garoowe, & Xiisad iyo cabsi ka taagan magaalada + Khasaare | HalQaran.com
Garoowe (Halqaran.com) – Warar goor-dhow naga soo gaaray magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal ayaa sheegaya in is rasaasayn xoogan ay caawa ka dhacday magaaladaasi, taasoo baqdin ku dhalisay bulshada deegaanka.
Wararka ay haleyso Halqaran.com ayaa sheegaya in is rasaasayntan ay ka dhacday afaafka hore ee Xarunta Baarlamaanka Puntland, taasoo u dhaxeysay ilaalada Baarlamaanka iyo ciidan kale, oo sida la sheegay ka socday dhinaca Madaxtooyada Puntland.
Ciidamo isugu jira boolis, PIS iyo Daraawiishta Puntland ayaa la soo sheegaya in ay weerar ku qaadeen ilaalada Xarunta Baarlamaanka, kuwaa oo taabacsan Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Cabdixakiin Maxamed Axmed.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda iminka gacanta ku haysa Xarunta Baarlamaanka Puntland, balse wararka ugu buuran ayaa sheegaya in ay ku sugan yihiin askartii horey u joogtay.
Tani ayaa waxay ku soo aadaysaa, xilli Magaalada Garoowe uu ka socdo olole la sheegay in mooshin looga keenayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland, oo khilaaf uu kala dhaxeeya Madaxtooyada Puntland.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in caawa ay isgaarsiinta Magaalada Garoowe ay aad u ciriiri tahay, iyadoona baqdin xooggan ku abuurtay dadka deegaanka.
Si kastaba, shacabka reer Garoowe oo xasilooni u bartay ayaa ku argagaxay rasaasta xoogan ee caweysnimadii caawa laga maqlay Xarunta Gobolka Nugaal.
Ugu dambeyn, masuuliyiinta Maamulka Puntland iyo Saraakiisha Ciidamada ayaan weli ka hadlin is rasaasaynta caawa ka dhacday Magaalada Garoowe.
DAAWO VIDEO: Dr. Gaboose oo waxba u reeban Muuse Biixi, ‘isbaheysiga waa Shaar ay kaligood ku macaashaan‘!
israsaaseyn caawa ka dhacay Garoowe
mooshin ka dhan ah baarlamaanka Puntland